Nnwom 101 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔhene bi de koma a edi mu bɛnantew
‘Me ne obi a ɔyɛ ahantan ani renhyia’ (5)
‘Mɛdom anokwafo’ (6)
Dawid dwom. 101 Ɔdɔ a enni huammɔ ne atemmu ho dwom na mɛto. O Yehowa, wo na mɛto ayeyi dwom* ama wo. 2 Mede nhumu bɛyɛ ade, na meremma asɛm mma me ho.* Da bɛn na wobɛba me nkyɛn? Koma a edi mu+ na mede bɛbɔ me bra wɔ me fi. 3 Meremfa biribiara a mfaso nni so* nsi m’ani so. Wɔn a wɔaman afi nea ɛteɛ ho no, mikyi wɔn nneyɛe;+Me ne wɔn nni twaka biara.* 4 Obi a ne koma asɛe no, meremmɛn no koraa;Merempene adebɔne so.* 5 Obiara a ɔsɛe ne yɔnko din kokoam no,+Mɛma waka n’ano atom.* Obiara a ɔwɔ ahantan aniwa ne ahomaso koma no,Me ne n’ani renhyia. 6 Mɛdom asaase so anokwafoSɛnea ɛbɛyɛ a wɔne me bɛtena. Nea ne ho nni asɛm no,* ɔno na ɔbɛsom me. 7 Ɔdaadaafo biara rentena me fi,Na ɔtorofo biara nni hɔ a obegyina m’anim.* 8 Anɔpa biara, mɛma asaase so amumɔyɛfo nyinaa ayɛ dinn,*Na mɛpra nnebɔneyɛfo nyinaa afi Yehowa kurow no mu.+
^ Anaa “mɛma m’abrabɔ adi mu.”
^ Anaa “Meremfa adehunu biara.”
^ Anaa “Wɔn nneyɛe remmɛn me.”
^ Nt., “Merenhu adebɔne.”
^ Anaa “Meyi no afi hɔ.”
^ Anaa “Nea n’abrabɔ di mu no.”
^ Nt., “obegyina m’ani so.”
^ Anaa “meyi asaase so amumɔyɛfo nyinaa afi hɔ.”